ဒေါင်းတမာန်: 06/21/2009 - 06/28/2009
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Saturday, June 27, 20090comments
( ကိုဖြိုးဝေ ဘလော့ခ်မှ ကူးယူတင်ပြပါသည် )
( ကဗျာရှင် - ကိုကောင်းကင်ကို )
ညာဉ့် ငှက်မလေး တစ်ယောက်က ဖောက်သည်မျှော်
ပါရာဒို တစ်စီးက ဗွက်တွေ စင်အောင် မောင်းသွား။
တစ်ပြည်လုံးလည်း နားညီးနေပြီ… အော်ဂလီ ဆန်ချင်စရာ။
“ဆန်တစ်ပြည်ကို ၁၅၀၀ တောင်” အဲဒါ အဘွားညီးတဲ့ အသံ။
သူများဆီမှာ ကျွန်ခံဖို့ goကြပေဗျို့ ……..။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Saturday, June 27, 2009 1 comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Thursday, June 25, 20090comments
ရန်ကုန်မှာ လုံခြုံရေး ကားများ လှည့်ပတ် မြင့်မောင်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇွန်လ 24 2009 21:29 - မြန်မာစံတော်ချိန်
တရုတ်ပြည်ထုတ် FAW ကား တစီးလျှင် လုံထိန်းရဲ ဦးရေ ၂၀ ခန့် လိုက်ပါလာကြသည်။
“လုံထိန်းကား ၃၀၊ ၄၀ လောက် ပတ်နေတယ်။ အခုဟာက လုံခြုံရေးကို တပ်လှန့်ထားတဲ့ သဘောမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကားခေါင်မိုးပေါ်မှာ စက်လတ်တွေ တင်ထားတယ်။ လုံထိန်းအပြည့်နဲ့ ပတ်နေတာ။ ကျနော်တို့ ဘက်ကို ညနေ ၃ နာရီ မထိုးမီ ပတ်သွားတယ်” ဟု ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ရသူ အင်းစိန်မြို့ခံတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“အရင်တုန်းက နောက်ခန်းမှာ ဒိုင်းတွေ ဘာတွေ ကိုင်ထားတယ်။ ယူနီဖောင်း အပြည့်ဝတ်ထားတယ်။ အခုဟာက လူတယောက်က မတ်တပ်ရပ်ပြီး ကားခေါင်မိုးမှာ စက်လတ်ကို အသင့်ထောက်ထားတာ” ဟု သူက ဆိုသည်။
ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှေ့၌ လုံထိန်းကား ၃ စီးက ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် သွားလာနေကြောင်း အခြား မြို့ခံတဦးက ဆိုသည်။
“ယူနီဖောင်း အပြည့်ဝတ်ထားတဲ့ လုံထိန်းကား ၃ စီးက ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် လှည့်ပတ်နေတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
“ကားပေါ်မှာ လုံထိန်းရဲတွေက ယူနီဖောင်း အပြည့်ဝတ်ထားတယ်။ ဒိုင်းတွေကို ကား ပတ်ပတ်လည် ကာထားတယ်။ လက်ထဲမှာ ဒုတ်တွေ၊ သေနတ်တွေလည်း ပါတယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
လုံထိန်း ရဲတပ်ရင်း အမှတ် ၈ သည် အင်းစိန်ထောင်ရှေ့၌ လုံခြုံရေး ယူထားသလို၊ ထောင်အတွင်း၌လည်း အထူးလုံထိန်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ချထားကြောင်း သိရသည်။
Google talk or G-talk သုံးစွဲသူတွေဗမာပြည်တွင်ဖမ်းသည်
ဂူ ဂဲလ် တော့ခ် (google talk) ခေါ် ဂျီတော့ခ် (gtalk) သုံးစွဲသူတွေ
မြန်မာပြည်မှာ အဖမ်းခံရတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က မိုးမခ နဲ့
တခြားဘလော့တွေမှာ ဖတ်ရတော့ စစ်အစိုးရရဲ့ တင်းကြပ်တဲ့ အင်တာနက်
စောင့်ကြည့်ရေး အောက်မှာ အရဲစွန့် သုံးစွဲနေသူများကို အထူး
စိုးရိမ်နေခဲ့တာ အမှန်ပါ။ ညီငယ်တဦး ဖြစ်သူလည်း မကြာသေးခင်က
တက်ကြွလူငယ်တစုနဲ့ အတူ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများကို အကြည်ညိုပျက်
အသရေဖျက်မှုနဲ့ ထောင်ဒဏ် ကျခံနေရကာ နောက်ဆက်အမှုတွဲအဖြစ် သူရဲ့
အင်တာနက်ဆိုင် ဝင်ထွက် သွားခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်း အချက် အလက်ကြောင့် အင်တာနက်က
တဆင့် သတင်းဖြန့်ဝေမှု ဘာ ညာ လုပ်တယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်များနဲ့ အင်တာနက်
ဆက်သွယ်ရေး နည်းဥပဒေ ၃၄ (ဃ) ဖြင့် ပြစ်ဒဏ် ပိုမိုချနိုင်ဖို့
တရားစွဲဆိုမှု ခံနေကြောင်း မိဘများက ပြောပြတယ်။
အများသိတဲ့အတိုင်း ယနေ့ မြန်မာပြည်မှာ အကြောင်း အမျိုးမျိုးနဲ့
ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ နိုင်ငံရေး တက်ကြွသူတွေကိုလည်း စစ်အစိုးရက
အင်တာနက်ဆိုင်သွား၊ အင်တာနက်သုံးတာ ရှိရင် ဒီ အင်တာနက်ဆိုင်ရာ
မတရားဥပဒေနဲ့ ထောင်ချဖို့ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ ဒီတော့ အခုရက်အတွင်း
ဂျီတော့ခ် သုံးစွဲတာကို အစိုးရက ကြားဖြတ် ဝင်ရောက်ပြီး အချက်အလက်တွေ
ရယူနိုင်တာကြောင့်လို့ သတင်းတွေမှာ မတင်မကျ ရေးထားတာကြောင့်
အင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေမှာ ဂျီမေးလ် (gmail) ဂျီတော့ခ် သုံးစွဲတာ
လုံခြုံမှုမရှိ သူတို့ ပြောဆိုရေးတာတွေကို အစိုးရက အချိန်မရွေး ကြားဖြတ်
ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ ထင်ရောင်ထင်မှား ဖြစ်ကြကုန်ပါတယ်။ ဒီလို
အစိုးရသတင်း အချက်အလက် ရယူနိုင်တာ ဂျီမေးလ် လုံခြုံမှု မရှိလို့ မဟုတ်ဘဲ
သုံးစွဲသူများ အခြေခံ ရှောင်သင့် ဆောင်သင့်တာ မလုပ်နိုင်တာက တကြောင်း နဲ့
စစ်အစိုးရရဲ့ တင်းကြပ်တဲ့ ထိန်းချုပ်မှုများကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက်
အနည်းဆုံး အင်တာနက် သုံးစွဲနေသူများ အနေနဲ့ သိသင့် ရှောင်သင့် ဆောင်ရန်
အင်တာနက်လောကကို ဦးဆောင်နေတဲ့ ဂူးဂဲလ် (google) အုပ်စုထုတ် ဂျီတော့ခ်၊
ဂျီမေးလ် တို့ကို အလွယ် ဝင်ရောက်ကာ သုံးစွဲသူရဲ့ သတင်း အချက် အလက်
ယူလို့မရနိုင်ပါ။ အများအားဖြင့် ဒီလို မိမိတို့ သတင်း အချက်အလက်တွေကို
တပါးသူ ရယူနိုင်တာ၊ ဖျက်ဆီး နှောက်ယှက်ခံရတာ အင်တာနက် သုံးစွဲသူများ
ကိုယ်တိုင် အင်တာနက် သုံးစွဲရာမှာ သိသင့်တဲ့ အခြေခံ ရှောင်ရန်
ဆောင်ရန်များကို အလေးမထား မလုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ မြန်မာပြည် အင်တာနက် သုံးစွဲနေမှုကို အကြမ်း လေ့လာကြည့်ရင်
အင်တာနက်သုံးစွဲသူ အရေအတွက် အလွန်နည်းပါးလျက်ရှိပြီး သုံးစွဲသူများ
စာရင်း အရေအတွက်ကိုလည်း စစ်အစိုးရက အလွယ် ရရှိနိုင်ပါတယ်။ အများစုမှာ
အင်တာနက်ဆိုင်များမှာ သုံးစွဲနေရပြီး အများစုမှာ အင်တာနက် နည်းပညာကို
စလုံးရေးစ မသိသေးသူများသာ ဖြစ်ကြပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ တချက်က အခမဲ့
ရယူနိုင်တဲ့ ဟော့မေးလ် (hotmail) နဲ့ ယာဟူး (yahoo) တို့ကို ယနေ့အထိ
ပိတ်ပင်ထားပြီး ဂျီမေးလ် ကိုသာ ရယူနိုင်ပါတယ်။ ထူးခြား ထူးဆန်းတာက
အီးမေးလ် အသစ် ဖွင့်လိုသူများမှာ အင်တာနက်ဆိုင်ကိုသွားပြီး ဂျီမေးလ်
ဖွင့်ပေးဖို့ ငွေပေး လုပ်ကိုင်ရကြောင်း၊ ဖွင့်ပေးတဲ့ အီးမေးလ်ရဲ့
သုံးစွဲသူ အမည် (username) နဲ့ စကားဝှက် (password) တို့ကို
အင်တာနက်ဆိုင်က မှတ်ယူ သိမ်းထားပြီး အီးမေးလ် လာသုံးတဲ့အခါ ဆိုင်က
ဖွင့်ပေးကြောင်း ညီငယ်တဦးက ပြောပြပါတယ်။
စစ်အစိုးရအနေနဲ့ တဖက်မှာလည်း ဘယ်သူတွေ ဘယ်အချိန်ကာလမှာ အင်တာနက်
သုံးစွဲတယ် ဆိုတာကို အင်တာနက် ဆိုင်များရဲ့သုံးစွဲသူမှတ်တမ်း
(အဝင်-အထွက်၊ သုံးစွဲတဲ့ အချိန်ကာလ) ကို ယူကြည့်ခြင်းဖြင့်
အခုနောက်ပိုင်း တချို့ အင်တာနက်ဆိုင်များမှာလည်း ကွန်ပြူတာ (အင်တာနက်)
သုံး ဝါရင့်လာသူများ ရှောင်ရှားမှုကို ထောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ အာဏာပိုင်များက
keylogger ခေါ် ကွန်ပြူတာသုံးစွဲသူ အသုံးပြုပုံ စာရိုက်ချက်တွေကို
မှတ်ယူနိုင်တဲ့ စနစ်ကို ကွန်ပြူတာများမှာ ထည့်သွင်းပြီး
းကို ထောက်လှမ်း ရယူနေတယ်လို့ သိရှိရတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ဒေသမှာ နေနေ အများသုံး ကွန်ပြူတာကို သုံးပြီး
အင်တာနက် ကြည့်သူ သုံးသူများအတွက် လုံခြုံမှုမှာ ကိုယ်ပိုင် ကွန်ပြူတာနဲ့
ကိုယ့်အိမ်မှာ သုံးတာထက် အထူး နည်းပါးပြီး မိမိရဲ့သုံးစွဲမှု
အချက်အလက်များကို တခြားလူများက အလွယ်တကူ ဖော်ထုတ် ရယူနိုင်ပါတယ်
(စကားချပ် - ဒီဖက် အမေရိကန်နိုင်ငံ နဲ့ တိုးတက်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာလည်း
နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး အကြမ်းဖက် လှုပ်ရှားမှုများ နဲ့ အသက် ၁၈ နှစ်အောက်
ကလေးငယ်များရဲ့ ကာမဆိုင်ရာ ပုံများ ဖလှယ်မှု၊ အသက် မပြည့်သူများနဲ့
ကာမဆိုင်ရာ ဆက်သွယ် လုပ်ကိုင်မှုများကို စောင့်ကြည့် ကြားဖြတ်
အင်တာနက်ပေါ်မှာ နိုင်ငံရေး ဆိုင်ရာ အကြောင်း အရာ အချက် အလက်များ ရေးသား
ပြောဆိုတာတွေကို အထူး တင်းကြပ် စောင့်ကြည့်နေတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ အင်တာနက်
သုံးစွဲနေသူများ အနေနဲ့ တက်နိုင်သမျှ အင်တာနက်ဆိုင်များ လူမြင်ကွင်းမှာ
လျှိုဝှက်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရာ အချက်အလက်များကို ဂျီတော့ခ်၊ အီးမေးလ်
တို့မှတဆင့် ရေးသားပို့ဆောင်၊ ဖလှယ်ခြင်းများကို အထူးဂရုစိုက်
လုပ်ကိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ တဖက်မှာလည်း အင်တာနက်သုံးစွဲသူအနေနဲ့ အခြေခံ
မဖြစ်မနေ လုပ်သင့်တာများကို ပြင်ဆင်လုပ်ကိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
(၁) အင်တာနက်ဆိုင်က မိမိ အီးမေးလ် (ဂျီမေးလ်)၊ ဂျီတော့ခ် များကို
ဖွင့်ပေးထားပါက စကားဝှက်အသစ်ကို မိမိကိုယ်တိုင် ရွေးချယ် ပြောင်းလဲပါ။
အတက်နိုင်ဆုံး မိမိ စကားဝှက်ကို သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ၊ မောင်နှမ ဆွေမျိုး
သားချင်း မည်သူကိုမှ ပေးမသိဖို့၊ အလွယ် ရေးမှတ်ထားခြင်း မလုပ်ဖို့ နဲ့
အနည်းဆုံး သုံးလတကြိမ် စကားဝှက် အသစ် ပြောင်းလဲပါ။ ဂျီတော့ခ်၊
ဂျီမေးလ်ကို အများသုံး ကွန်ပြူတာမှာ သုံးစွဲတဲ့အတွက် အီးမေးလ်ကို
ဖွင့်တဲ့အခါ သုံးစွဲသူအမည်၊ စကားဝှက် တို့ကို ဖြည့်ပြီးတဲ့အခါ
အောက်ဖက်ရှိ Remember me on this computer ချက်ဘောက် ကို check
မလုပ်ပါနဲ့။ အင်တာနက် သုံးပြီးတဲ့ အခါလည်း အီးမေးလ်ကို logout လုပ်ပြီး
အင်တာနက် ဘရော့စာ တခုလုံးကို exit လုပ် ပိတ်ပစ်ပါ။ ဂျီတော့ခ်
ဝင်ဒိုးကိုလည်း exit လုပ် ပိတ်ပစ်ပါ။
(၂) ဂျီတော့ခ်၊ ဂူးဂဲလ်တော့ခ် သုံးသူများအနေနဲ့ မိမိ သိတဲ့သူ
ရင်းနှီးသူများကိုပဲ မိမိတို့ စကားဝိုင်းထဲကို ဖိတ်ခေါ် ထည့်သွင်းဆက်သွယ်
ပြောဆိုပါ။ မိမိ မသိသူ တဦး တယောက်က ချိတ်ဆက်လာ၊ ဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါ
ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဆိုတာကို သိအောင် စီစစ်ပြီးမှ မိမိ စကားပြော အုပ်စု စာရင်းထဲ
ထည့်သွင်းပါ။ မသိသူ ဖိတ်ခေါ်မှုကို အလွယ်လက်ခံခြင်း၊ မိမိ အုပ်စုထဲ
ထည့်သွင်းခြင်း မလုပ်သင့်ပါ။ ထောက်လှမ်းသူများအနေနဲ့ မိမိ သူငယ်ချင်း
မိတ်ဆွေပုံစံမျိုးနဲ့ စကားပြောအုပ်စုထဲ ဝင်ရောက်ဖို့ ကြိုးစားနိုင်တာမို့
ဂျီတော့ခ် နဲ့ စကားပြောမယ်ဆိုရင် ကြိုတင် (ဖုန်း) အချိတ်အဆက် လုပ်ပြီး
ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်သူဘယ်ဝါနဲ့ ဆက်သွယ် ပြောမယ် ဆိုတာမျိုး
လုပ်ကိုင်သင့်ပါတယ်။ မိမိအနေနဲ့ တဦး တယောက်ကို မိမိတို့ စကားပြော
အုပ်စုစာရင်း ထည့်သွင်း လက်ခံပြီးရင် စာရင်းထဲရှိသူများက ဂျီမေးလ်၊
ဂျီတော့ခ်ကို ဆက်သွယ်ဖွင့်တိုင်း သူတို့အနေနဲ့ မိမိ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်
သုံးနေတာကို သိနိုင်ပါတယ်။ မိမိ မလိုလားတဲ့သူ မသိတဲ့လူ ဆက်သွယ်ရေး
စာရင်းထဲမှာ ရှိနေရင် ဖယ်ရှားလိုတဲ့ အမည်ရဲ့ ရွေးပြီး မောက်စ် ညာဘက် ကို
နှိပ်ပြီး remove လုပ်နိုင်သလို၊ Block လုပ်ပြီး တားမြစ်နိုင်ပါတယ်။
(၃) ဂျီတော့ခ် သုံးစွဲမှုမှ ဗိုင်းရပ်စ် ရနိုင်သလားလို့ မေးတာကို ဖြေရရင်
ဂျီတော့ခ် ဖွင့်သုံးခြင်းမှ မရနိုင်ပါ။ သို့ပေမယ့် မိမိနဲ့ ချိတ်ဆက်
စကားပြောနေသူ (စကားပြောအုပ်စုထဲမှ တဦးတယောက်)က အီးမေးလ်မှ တဆင့်
ပို့လာတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် (virus) စပိုင်ဝဲယား (spyware)၊ စပမ် (spam) စတဲ့
ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နာလင့်ခ် များကို ဖွင့်ကြည့်ရာမှ
ဗိုင်းရပ်စ်တို့၊ စပိုင်ဝဲယား တို့ကို ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မသိတဲ့
လင့်ခ်များ၊ ပူးတွဲစာ၊ ပုံ (attachment file) များကို
အလွယ်ဖွင့်ကြည့်ခြင်း၊ ဒေါင်းလုတ် ရယူခြင်းများကို ရှောင်ရှားပါက
(၄) တခါတလေ ဂူးဂဲလ် က ဆက်သွယ်လာတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ အီးမေးလ်စာ (သို့)
ဂျီတော့ခ် က တဆင့် မိမိရဲ့အမည်၊ စကားဝှက် တို့ကို တောင်းယူတဲ့အခါ
ထင်ယောင် ထင်မှားဖြစ်ပြီး မပေးပါနဲ့။ ဂူးဂဲလ် အနေနဲ့ သုံးစွဲသူများရဲ့
အချက်အလက်ကို တောင်းစရာမလိုဘဲ လိုအပ်ပါက သုံးစွဲသူများရဲ့
အချက်အလက်များကို အလိုအလျောက် ဝင်ရောက် ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
သဘောတူညီချက်အရ ဘယ်တော့အခါမှ သုံးစွဲသူရဲ့ အမည်၊ စကားဝှက်များကို ဂူးဂဲလ်
အနေနဲ့ တောင်းဆိုခြင်း၊ တခြား တယောက်ကို ပေးခြင်း မရှိပါ။ ဝင်ရောက်
ပြင်ဆင် လုပ်ကိုင်ခြင်းမျိုးလည်း မရှိပါ။ တခါတလေ အောက်ဖော်ပြပါ
ဂူးဂဲလ်တော့ခ် ပုံစံမျိုးနဲ့ သုံးစွဲသူ အမည်၊ စကားဝှက်တို့ကို
တောင်းခံရယူပြီး မိမိ အချက်အလက်များကို ရယူတက်ပါတယ်။ သတိထား
ရှောင်ရှားဖို့ လိုပါတယ်။ ဂူးဂဲလ်အနေနဲ့ သုံးစွဲသူအီးမေးလ်ကို
သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ သုံးစွဲသူ လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ
ဖောက်ဖျက်တဲ့အခါမှ ဖျက်သိမ်း ပိတ်ပစ်တာမျိုး ရှိပါတယ်။
ဂျီတော့ခ် (ဂျီမေးလ်တော့ခ်) မှာ မိမိပြောဆို ရေးခဲ့သမျှကို
သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကိုယ်ပိုင် သုံးစွဲသူအမည်၊
စကားဝှက်တို့နဲ့ ဖွင့်မှ အီးမေးလ်စာများ နဲ့ သိမ်းထားတဲ့
စကားပြောမှတ်တမ်း (Your browser may not support display of this image.
Chat) ကို ဖွင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ် (ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့
အာဏာပိုင်များက မိမိ အင်တာနက် ဂျီတော့ခ် သုံးစွဲမှုကို စုံစမ်း
စစ်ဆေးလို့ပါက အကြပ်ကိုင် အတင်း အဓမ္မ အမိန့်အာဏာနဲ့
ဖွင့်ယူကြည့်ခြင်းဖြင့် မိမိ ရေးပြောခဲ့တာများကို ဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်)။
သိမ်းဆည်းထားတဲ့ စကားပြော မှတ်တမ်းကိုလည်း အီးမေးလ် စာဖိုင်များလိုပဲ
တခြားတဦး တယောက်ဆီကို ပို့ပေးနိုင်သလို၊ ဖျောက်ဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။
အရေးပါ လျှိုဝှက်သင့်တဲ့ အချက်အလက်များကို စကားပြောမှတ်တမ်း (chat
history) မှာ သိမ်းဆည်းထားခြင်း မလုပ်သင့်ပါ။ ဒီအတွက် အာဏာပိုင်များ
မိမိပြောဆိုခဲ့တာကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ် မကြည့်နိုင်ဖို့
စကားပြောမှတ်တမ်းကို အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်
(၃) Chat စာမျက်နှာမှာ Select 'Don't save chat history in my Gmail
account' ကို ရွေးပြီး Save လုပ်ခြင်းဖြင့် မိမိပြောဆိုခဲ့တာတွေကို
ဂျီးမေးလ်ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားခြင်း မရှိတော့ပါ။ အကယ်လို့ သိမ်းဆည်းလို့ပါက
အထက်ပါအဆင့်အတိုင်း ပြန်သွားပြီး 'Save chat history in my Gmail
account' ကို နှိပ်ပြီး Save လုပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် မိမိ
ပြောဆိုခဲ့တာတွေကို စကားပြောမှတ်တမ်း မှာ သိမ်းထားလိမ့်ပါမယ်။
(၂) မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းစာရင်း အထက်ပိုင်းရှိ Settings ကို နှိပ် Chat မှာ
'Don't save chat history in my Gmail account' ရွေးလိုက်ခြင်းဖြင့်
မှတ်တမ်းသိမ်းဆည်းမှုကို ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ သိမ်းထားလိုပါက အထက်ပါ
အဆင့်အတိုင်း လုပ်ပြီး 'Save chat history in my Gmail account'
ရွေးလိုက်ပါ။ ပြီးနောက် OK လုပ်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ မိမိဖက်က စကားပြော မှတ်တမ်းကို သိမ်းဖို့ မလုပ်ထားပေမယ့်
တဖက် စကားပြောသူများက သိမ်းထားရင်လည်း မိမိတို့ စကားပြော မှတ်တမ်း
အကြောင်းအရာ အချက်အလက်များကို သူတို့ မှတ်တမ်းမှ ရယူနိုင်ပါတယ်။
သူတို့ဆီမှာ မိမိ ပြောဆိုချက်များကို မတင်ကျန် မသိမ်းဆည်းလိုပါက
မိမိအနေနဲ့ off the record ကို ရွေးချယ် သုံးသင့်ပါတယ်။
Off the record လုပ်ထားခြင်းဖြင့် မိမိ စကားပြောမှတ်တမ်း နဲ့ ဆက်သွယ်
ပြောဆိုသူများရဲ့ မှတ်တမ်းများမှာ မိမိတို့ ပြောဆိုချက်များ မတင်ကျန်
သိမ်းဆည်းထားခြင်း မရှိတော့ပါ။ Off the record လုပ်ထားတာကို မိမိ နဲ့
ဆက်သွယ် စကားပြောသူများ သိနိုင်ပြီး မိမိ ဂျီတော့ခ်မှာ Off the record
ဖြစ်နေတာကို အသိပေးတာကို တွေ့ရပါမယ်။
ဂျီတော့ခ် ဝင်ဒိုး အပေါ်ပိုင်း ညာဖက်ရှိ အောက်ဖက်ညွန်းမျှား (down arrow)
ကို နှိပ်လိုက်ပြီး Go off the record ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ၊
ဂျီမေးလ်ချက်မှာတော့ ချက်ဘောက် (chat box) ရှိ Video & more
မြားကလေးကိုနှိပ်ဖွင့်ပြီး အထက်ဖက်ရှိ Off the record ရွေးချယ်လိုက်ရင်
မိမိနဲ့ ဆက်သွယ်သူများရဲ့ ပြောဆိုချက်များကို သိမ်းဆည်းထားမည်
မဟုတ်ကြောင်း သတိပေးချက်ကို ရရှိပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ မိမိအနေနဲ့
ပြောဆိုချက်များကို သိမ်းဆည်းထားလိုပါက ဂျီတော့ခ် ဝင်ဒိုး အပေါ်ပိုင်းရှိ
cancel (သို့) Options အောက်ရှိ stop chatting off the record ရွေးချယ်
အထက်ဖော်ပြပါ အကျဉ်းချုပ် ရှောင်ရန်ဆောင်ရန် သတိပြုစရာများကို
လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အင်တာနက် သုံးစွဲခြင်းကို အနေအထားတခု အထောက်အကူ
ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ လွတ်လပ်စွာ
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Wednesday, June 24, 20090comments
ငါပြောသလိုလုပ်ပါ ငါလုပ်သလိုမလုပ်နဲ့ အဖြစ်မျိုး မကြုံမှီ
မွန်ပြည်သစ်ပါတီအား အပစ်ရပ်မိုင်းလားအဖွဲ့ကဖိတ်ကြား စံခလပူရီ(ဇွန်-၂၄)။ ။ အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မတော် - သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း NDAA-ESS မိုင်းလားအဖွဲ့ အပစ်ရပ်ခဲ့ခြင်းအနှစ် ၂၀ ပြည့်အခမ်းအနားကို လာမည့် ဇွန်လ ၂၉ - ၃၀ ရက်နေ့များ၌ မိုင်းလားမြို့ ဗဟိုဌာနချုပ်၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်ရာ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ NMSP ကိုလည်း ယင်းအခန်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားထားသည်ဟု မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တစ်ဦးက ယနေ့တွင်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဆူဆူဆိုတာက ခမီး အမျိုးသမီးငယ်လေး တဦးဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်
တရွာလုံးမှာ အလှဆုံး ကွမ်းတောင်ကိုင်မလေး ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်က ငယ်ငယ် အသားက
ဖြူဖွေးပြီး ချစ်စရာကောင်းသူမို့ သူမအပေါ် တရွာလုံးမှာရှိတဲ့ ကာလသားတွေက
၀ိုင်းဝန်း ပိုးပန်းကြပါတယ်။ သူမနေထိုင်ရာ ရန်အောင်မြင် ကျေးရွာဟာ
မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ပိုင်းက တိုက်နယ်ကျေးရွာ ကြိမ်ချောင်းနဲ့
ပါးနီးပါးစပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီရွာမှာ ရခိုင်၊ ခမီး၊ ဒိုင်းနက်နဲ့
သက်စတဲ့ လူမျိုးတွေ ရောပြွမ်းနေထိုင်ကြပြီး အိမ်ခြေ ၁၂၀ ကျော် ရှိပါတယ်။
အဲဒီရွာမှာ နေထိုိင်တဲ့ လူတွေကတော့ ရခိုင်ဒေသရဲ့ ဓလေ့ ထုံးစံ အတိုင်း
လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။ ဆူဆူရဲ့ မိဖ တွေလည်း
တောင်ယာလုပ်ငန်းနဲ့ အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်းမှု ပြုသူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဆူဆူမှာ သူအထက်က အမ တဦးနဲ့ မောင်တဦး ရှိပါတယ်။ သူမဟာ စာလေးတန်းထိသာ
သင်ကြားခဲ့ပြီး မူလတန်း ကျောင်းပီးတာနဲ့ ပညာကို ဆက်လက် မသင်ကြားတော့ဘဲ
မိဖတွေရဲ့ အိမ်မှုလုပ်ငန်းတွေကို ကူညီ လုပ်ကိုင်နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆူဆူတို့
နေထိုင်နေတဲ့ ရန်အောင်မြင်ကျေးရွာဟာ နည်းနည်း ချောင်ကျတာကြောင့်
စစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ စစ်သားတွေ ရံဖန် ရံခါ ရောက်တာက လွဲပြီး
ရက်ကြာကြာ တည်းခိုနေထိုင်တာ မရှိပါဘူး။ ခုလို စစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်တွေ
အရောက်အပေါက် နည်းတဲ့အတွက်လည်း တရွာလုံးမှာ အလှဆုံး ဆူဆူဟာ အပျိုဖေါ်
၀င်စမှာ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ စက်ကွင်းထဲက လွတ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း
နောက်ပိုင်းမှာ ဆူဆူဟာ ရမ္မက်သားအာဏာပိုင်တွေရဲ့ စက်ကွင်းကို ကြာကြာ
၂၀၀၉ ခုနှစ် မတ်လ နောက်ဆုံးအပတ်ထဲက တနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီိနေ့မှာ ဘီအီး
လို့ခေါ်တဲ့ စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတပ်ရင်းက တပ်စုတစုဟာ
ခြံစည်းရိုးစီမံကိန်း အတွက် ဆူဆူတို့ နေထိုင်ရာ ရန်အောင်မြင် ကျေးရွာကို
ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဗမာစစ်သားတွေရဲ့ "အိမ်ကြီးကြီး၊ ရေတွင်းနီးနီး၊
ဖင်ကြီးကြီး" ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း အချက်သုံးချက်နဲ့ ပြည့်စုံတဲ့
ဆူဆူတို့ အိမ်ဘေးနားက အိမ်ကြီး တလုံးကို သူတို့ ရွှေးချယ်ပြီး
တည်းခိုကြပါတယ်။ တည်းခိုပြီး သိပ်မကြာခင်မှာဘဲ "အမေတို့ အဖေတို့
နေကောင်းကြပါသလား" ဆိုပြီး စစ်သားအုပ်စု တစုဟာ ဆူဆူတို့ အိမ်ကို ရောက်ရှိ
လာခဲ့ပါတယ်။ ဆူဆူကို မြင်တယ်ဆိုရင်ဘဲ စစ်သားတွေဟာ အကြောင်းမရှိ
အကြောင်းရှာပြီး ဆူဆူရဲ့ အဖေအမေနဲ့ အတင်း ၀င်ရောပါတော့တယ်။ ဆူဆူရဲ့
အဖေအမေကလည်း တောသူတောင်သားတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် စေတနာ ကောင်းတာက တကြောင်း
စစ်သားတွေကို ကြောက်တာက တကြောင်း အိမ်မှာရှိတဲ့ ပြောင်းဖူးက အစ
လဘက်ရည်အဆုံး ရှိရှိသမျှ စားစရာတွေနဲ့ စစ်သားတွေကို ကျွေးမွေး ဧည့်ခံ
ပါတော့တယ်။ စစ်သားတွေကလည်း မိမိ တည်းခိုနေရာကို ပြန်ဖို့ စိတ်မရ တော့ဘဲ
ဆူဆူရဲ့ အလှနဲ့ ကျွေးမွေးတဲ့ အစားအစာတွေကို အားရပါးရ လွေးကြပါတော့တယ်။
ကျွေးမွေးသမျှကို "အားနာစရာကြီး မလုပ်ပါနဲ့၊ မလုပ်ပါနဲ့" ဆိုပြီး
စားကြတာကတော့ ငတ်နေတဲ့ တိုင်းပြည်ကလာတဲ့ လူတွေ အတိုင်းပါဘဲ။ ဆူဆူလည်း
မီးဖိုချောင်နဲ့ အိမ်ရှေ့ကွပ်ပျစ် ၀င်လိုက် ထွက်လိုက်နဲ့ စားစရာတွေကို
ကျွေးမွေးနေရတော့ သူ့ကို စူးစူးစိုက်စိုက် ကြည့်နေတဲ့ စစ်သားတွေအထဲက
စစ်သားတဦးနဲ့ မျက်လုံးချင်း ဆုံမိကြပါတော့တယ်။ အဲဒီ စစ်သားရဲ့ စူးချတဲ့
အကြည့်ကို ဆူဆူလို နုနယ်တဲ့ အတွေ့အကြုံ မရင့်ကျက် သေးတဲ့ မိန်းခလေးတဦးက
ခံနိုင်ရည် မရှိတာကတော့ သေချာပါတယ်။ အဲဒီစစ်သားရဲ့ မျက်လုံးစိမ်းနဲ့
စူးချတဲ့ အကြည့်ကိုမြင်တိုင်း ဆူဆူ ရင်ထဲမှာ လှိုက်ဖို သွားပါတော့တယ်။
စစ်သားတွေ ပြန်သွားပေမယ့်လည်း အဲဒီ စစ်သားရဲ့ စူးချတဲ့ အကြည့်တွေက
ဆူဆူရင်ထဲမှာ ကိန်းအောင်းကျန်လိုက် ပါတော့တယ်။
နောက်တနေ့ မနက်လင်းတော့ ရွာထဲက မင်းကျွန်ပျိုနှစ်ဦးဟာ ဆူဆူဆီကို
ရောက်လာပြီး စာတစောင်ကို လာပေးပါတယ်။ နင်တို့အိမ်ကို မနေ့က လာလည်သွားတဲ့
"တပ်ကြပ် ကျော်သက်" ဆီကစာဖြစ်တယ်။ "မနေ့က လာတဲ့ စစ်သားတွေထဲက ဆရာလေး
ကျော်သက် ကို နင် မှတ်မိပါတယ်"ဆိုပြီး စာကိုပေးကာ သူတို့ ထွက်သွားပါတယ်။
စာကို ဖတ်ကြည့်တော့ "သိပ်ချစ်မိသွားပြီ" ဆိုတဲ့ စာသား အောက်မှာ ဆူဆူကို
မြင်ရင် မြင်ချင်း ချစ်သွားခဲ့ရပုံတွေ၊ ဆူဆူလိုလှတဲ့ မိန်းခလေးမျိုးကို
ရခိုင်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ (၅) နှစ်တာ ကာလမှာ စတင် တွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက်
ခံစားရပုံတွေကို စာမျက်နာ (၂) မျက်နာကျော် ရေးသားထားတာကို ဆူဆူ
ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ စာကို ဖတ်ပြီးတာနဲ့ ဆူဆူရဲ့ စိတ်တွေဟာ စတင် လူးလွန့်
နောက်တနေ့ ဆူဆူတို့အိမ်ကို ကျော်သက်က သေနတ်ကလေးကို လွယ်ပြီး လာပါတယ်။
ဆူဆူကို မနေ့က ပေးတဲ့ စာကိုရသလားမေးပြီး အဖြေကို တောင်းပါတယ်။ ဆူဆူကလည်း
မြင်မြင်ချင်း ရင်ဖိုခဲ့ရသူမို့ ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်ပါတော့တယ်။
အဲဒီနေ့ကစပြီး ကျော်သက်ဟာ လုပ်ငန်းခွင်က ပြန်လာတိုင်း သူရဲ့ အချစ်တွေ
ကြီးမားတဲ့ အကြောင်းကို သက်သေပြဖို့ ဆူဆူဆီကို တန်းကနဲ ရောက်လာပါတော့တယ်။
များမကြာခင်မှာဘဲ နယ်စပ် ခြံစည်းရိုး စီမံကိန်းအတွက် ရောက်ရှိ လာတဲ့
စစ်သားတွေဟာ ရွာထဲကနေ ခြံစည်းရိုးကာရံနေတဲ့ ယာယီ စခန်းကို
ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ တပ်ကြပ် ကျော်သက်လည်း
ပါဝင်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း တပ်ကြပ် ကျော်သက်ဟာ အားလပ်ရက် ရောက်တိုင်း
ဆူဆူတို့ ရွာကိုလာလည်ပြီး ဆူဆူနဲ့ ချိန်းတွေ့ ပါတယ်။ အဲသလို
ချိန်းတွေ့နေတာကို ဆူဆူရဲ့ မောင်က တနေ့မြင်သွားတော့ ဆူဆူကို ဆဲဆို
ကြိမ်းမောင်းပြီး ရိုက်ပုတ် ပါတော့တယ်။ အဲသလို ရိုက်ပုတ်တဲ့ အပေါ်
တရွာလုံးက သိသွားတာကြောင့် ဆူဆူလည်း အရှက်ရပြီး ကျော်သက်နဲ့အတူ
သူနေထိုင်ရာစခန်းကို ခိုးရွာ လိုက်ပါသွားပါတော့တယ်။ ဆူဆူရဲ့ အပျိုစင်ဘ၀ဟာ
ခြံစည်းရိုးကာရံနေတဲ့ စစ်သားတဦးနဲ့ အတူ ယာယီတဲကလေး တလုံးရဲ့ မပီမပြင်
၀ိုးဝါးနေတဲ့ ကြယ်ရောင် မစုံတဲ့ ညအမှောင်အောက်မှာ
မနက်လင်းတာနဲ့ သူမရဲ့ ဘေးနားမှာ သူ့ချစ်သူ ကျော်သက် မရှိတာကို
သတိပြုမိတာနဲ့ ဆူဆူ ထထိုင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ သူမရဲ့ အဖေ အမေသံက တဲအပြင်က
ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ "သမီး ထွက်ခဲ့လေ။ အိမ်ပြန်ရအောင်" ဆူဆူလည်း အဖေ အမေ
အသံကို ကြားတာနဲ့ တဲအပြင်ကို ထွက်ပြီး "အဖေရယ် အခု ကျွန်မလေ
ကိုကျော်သက်ရဲ့ မိန်းမ ဖြစ်သွားပြီ။ သမီးတို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းကို
မခွဲပါနဲ့နော် ဖေဖေနော်။" ဆိုပြီး သူမ အဖေရဲ့ ခြေကို ဦးတိုက်ပြီး
ဆူဆူရဲ့ အဖေက ဆူဆူကို ဆိုးနင့်စွာ ကြည့်ရင်း "သမီးတို့ အချစ်ကို ဖေဖေတို့
မခွဲပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သမီးသူ့ကို လက်ထပ်လို့ မရနိုင်ပါဘူးကွယ် ။ တပ်က
သူ့ကို သမီးနဲ့ ခွင့်မပြုနိုင်ဘူး ဆိုပြီး ကိုယ့်သမီးကို ကိုယ် ပြန်ခေါ်
ပါဆိုပီး အကြောင်းကြားတဲ့ အတွက် ဖေဖေတို့ သမီးကို လာခေါ်တာပါ။ သမီး ချစ်သူ
ကျော်သက်မှာ မိန်းမနဲ့ ကလေးနှစ်ဦးရှိတဲ့ အတွက် တပ်က
သူမရဲ့ အဖေရဲ့စကားအဆုံးမှာ ဆူဆူရဲ့ နှလုံးသား တောင်ပြိုသွားသလို ဆူဆူဟာ
အရုပ်ကြိုးပြတ် ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ ဆူဆူက ကိုကျော်သက်နဲ့ ခဏလေး
တွေ့ချင်ကြောင်း ခွင့်တောင်းပေမယ့် တပ်အရာရှိက ကျော်သက်ကို ဖမ်းပြီး
ကြိမ်ချောင်းကို ပို့လိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် တွေ့ဆုံလို့ မရနိုင်တော့ဘူး
ဆိုတာကြောင့် ဆူဆူဟာ ကိုကျော်သက်ကို တွေ့ဆုံခွင့် မရခဲ့တော့ပါဘူး။
ဆူဆူတို့ သားမိ သားဖ သုံးဦး ငိုရှိုက်သံတွေနဲ့ အတူ ရွာကို ချိနဲ့စွာ
ပြန်သွားခဲ့တာကို တခြား တဲတလုံးကြားထဲက ခိုးကြည့်နေတဲ့ ကျော်သက် ကိုလည်း
အိမ်ကို ပြန်ရောက်တဲ့ အခါ ဆူဆူနဲ့ ဆူဆူ အမေတို့ရဲ့ ငိုရှိုက်သံတွေ၊
အဖေဖြစ်သူနဲ့ မောင်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ အံကြိတ်သံတွေ၊ ဆူဆူကို ဆဲဆို
ကြိမ်းမောင်းသံတွေကတော့ ရန်အောင်မြင် ကျေးရွာကို လွမ်းချုံသွားပါတော့တယ်။
(ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်း ဖြစ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော မေလ အတွင်းက
ရန်အောင်မြင်ကျေးရွာတွင် တကယ် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အဖြစ်အပျက်ကို "
ဘုန်းစည်သူ" က ရေးဖွဲ့ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။)
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Tuesday, June 23, 20090comments
Labels: ဖတ်ရန်, မျှဝေခြင်း, ပြည်သူ့ရင်ဖွင့်သံ
စစ်အာဏာရှင် ကျည်သင့်သေဆုံးသွားတဲ့ နီဒါ (အီရန်လက်ရှိ ဆန္ဒပြပွဲမှ)
နီဒါ ဆိုတဲ့၂၆ နှစ်သမီးအရွယ် ကျောင်းသူဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀ ဇွန်လ ၂၀၀၉ ရက်နေ့ မှာ ထီရန် ဆိုတဲ့မြို့ မှာ အဖေ ဖြစ်သူနဲ့မဲလိမ်ခဲ့ တဲ့ စစ်အစိုးရ ကိုဆန္ဒပြနေရင်း စစ်အစိုးရ သေနတ်သမားတဦးမှ ရင်ညွန့် တည့်တည့်သို့ပစ်ခံခဲ့ရပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့တဲ့ ကျောင်းသူလေးပါ၊ လောလောဆယ်မှာ နီဒါ ဟာ အီရန်နိုင်ငံရဲ့ (တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖုန်းမော်ကဲ့သို့ ) ထင်းရှားတဲ့ တော်လှန်ရေး အမှတ်အသားတခုအဖြစ်နဲ့အီရန်နိုင်ငံသားတွေ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။နီဒါ အပစ်ခံရတဲ့ နေ့ က ဗီဒီယို ကိုလည်း ဆန္ဒပြနေသူတဦးမှ လက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း တင်ခဲ့ပြီ အင်တာနက်မှာဖေါ်ပြခဲ့တဲ့အတွက် တကမ္ဘာလုံးက အကြည့်အများဆုံး ဗီဒီယိုအဖြစ် ယူကျူ့ (ဘ်)(Youtube Video) အင်တာနက် စာမျက်နှာမှာတင်မက စီအန်အန်(CNN) သတင်းဌာနကြီးများတွင်ဖေါ်ပြခဲ့ ပြီး ကြည့်ရှုသူ သန်းပေါင်းများစွာရှိခဲ့ ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်တွေက လောလေဆယ်သတ်ဖြတ်ခဲ့တာ တရားဝင်စာရင်းအရ ၁၀ ဦးကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း အယောက် ၅၀ ပို ကျော်နိုင်တယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေ က ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုနေကြပါတယ်၊ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ ဆန္ဒပြသူများ ဟာ အိမ်သို့ ပြန်မလာဘဲ ပျောက်ဆုံးနေကြတယ်လို့မိဘ ဆွေမျိုးများ က ဆိုပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကားနိုင်ပါစေ (ဒေါင်းTM)
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Monday, June 22, 20090comments
DKBA & SPDC
ရန်ကုန်(ဇွန်-၂၁)။ ။ရန်ကုန်တိုင်း ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း စီစစ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ လိုင်စင်မဲ့သက်တမ်းလွန် ဗီဒီယို လုပ်ငန်းရှင်များကို ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ဗီဒီယိုဥပဒေဖြင့် အရေးယူသွားမည်ဟု စစ်အစိုးရ ယနေ့ထုတ်သတင်းစာ
ဒီဗွီဒီယိုကတော့ ပြည်သူအများကြည့်သင့် ခံစားသင့်တယ်တယ်လို့ကျွန်တော်တင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ရပ်မှန်တွေမို့ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ် ဝေဖန် ပြီးယုံနိုင်ကြပါစေလို့ ။ဒေါင်းTM
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Sunday, June 21, 20090comments
It's happened because of Than shwe terrorist military group
BANGKOK, June 20 (UPI) -- More shelter and clothing is needed in Thailand for thousands of ethnic Karen villagers fleeing army attacks in neighboring Myanmar, refugee officials said.
"They have food and medical attention, but the flimsy makeshift homes they are now in provide inadequate protection from the weather," said Sally Thompson,aspokeswoman for the Thai Burma Border Consortium.
The most recent refugees, primarily women and children, have crowded onto the grounds ofatempleacouple of miles inside Thailand, IRIN, the Integrated Regional Information Networks, reported Saturday.
"We desperately need soap, toothbrushes and cooking utensils," said 33-year-old Ma Theingyi,amother of five. "More than anything though, we need clothes for our children."
The exodus of Karen villagers escalated June6when government troops in Myanmar, formerly known as Burma, beganamajor offensive against Karen rebels, IRIN reported.
More than 100,000 residents of Myanmar, most of them Karen, have fled to Thailand, the United Nations said.
မျောက်ကိုးလီးယား က ပစ်မယ်ဆိုရင် အမေလီကား က ကာကွယ်ဖို့ အသင့်
မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရက ပစိဖိတ်ကျွန်းဘက်ကို ဦးတည်ပြီး မစ်ဆိုင်း (Missile)
ဒုံးကျည် ပစ်လွှတ်ကောင်း ပစ်လွှတ်နိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်
အမေရိကန်ပိုင် ဟာဝိုင်ယီကျွန်း ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒုံးကျည်ကာကွယ်တဲ့ စနစ်တွေကို
အခိုင်အမာ အသင့်ပြင်ထားလိုက်ပြီလို့ အမေရိကန်စစ်တပ်က ပြောလိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ရောဘတ် ဂိတ်စ် (Robert Gates) က အမေရိကန်
အစိုးရဟာ မိမိတိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကို
ကြာသပတေးနေ့ထုတ် ဒေးလီး ယိုမီယူရီ (Daily Yomiuri) လို့ခေါ်တဲ့ ဂျပန်သတင်းစာ
မှာတော့ မြောက်ကိုရီးယားဟာ ဇူလိုင်လအစောပိုင်းမှာ ဟာဝိုင်ယီကျွန်းဘက်ကို
ဦးတည်ပြီး တာဝေးပစ် မစ်ဆိုင်းဒုံးကျည်တွေ ပစ်လွှတ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ ရေးသား
မေလ ၃၀ ရက်နေ့တုန်းက တေပိုဒွန် ၂ (Taepodon 2) ဒုံးကျည်တစင်းနဲ့ အဲဒီထက်
အဆင့်မြင့်တဲ့ ဒုံးကျည်တစင်းကို မြောက်ကိုရီးယားအနောက်မြောက် ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်
ရာ နေရာတခုက ပစ်လွတ်ခဲ့တာဟာ ဟာဝိုယီကျွန်းကို ပစ်လွှတ်နိုင်ဖို့အတွက်
ပြင်ဆင်နေတာ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးက ပြောခဲ့တာကို
လည်း အဲဒီသတင်းစာမှာ ကိုးကားထားပါတယ်။
အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဂိတ်စ်က ဟာဝိုင်ယီမှာ ဒုံးကျည်ကာကွယ်ရေး
ပစ္စည်းကိရိယာတွေကို အသင့်ပြင်ထားဖို့ သူ့အနေနဲ့ ခွင့်ပေးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့
ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမေရိကန်အနေနဲ့ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ဖို့
ပြင်ဆင်မှုတွေကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်အဖေခေါ် ဒွေးတော် ရရှားကိုလွမ်း ဗမာပြည်သူတွေခမ်းသထက်ခမ်းခြောက်ဆဲ
မြန်မာ့ရေနံပိုက်လိုင်း တရုတ် စဖောက်သွားမည်
ရေနံစိမ်းတင်ပို့မယ့် ပိုက်လိုင်းကို တည်ဆောက်မယ့် သဘောတူ နားလည်မှု
စာချွန်လွှာကို တရုတ်အမျိုးသား ရေနံကော်ပိုရေးရှင်း CNPC နဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ စွမ်းအင်
သဘောတူညီချက်အရ တရုတ်က အဲဒီရေနံပိုက်လိုင်းကို ပုံစံထုတ် တည်ဆောက်ပြီး
မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းဒေသမှာ ဆိပ်ခံတံတားကြီးနဲ့ ရေနံသိုလှောင်
ကန်တွေကိုလည်း တရုတ်က တည်ဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလကစပြီး
မိုင် ၇၀၀ ကျော်ရှည်မယ့် ပိုက်လိုင်းကို တရုတ်က စတင်တည်ဆောက်ပါလိမ့်မယ်။
ကုန်ကျငွေ ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၂,၅၀၀ ရှိပြီး ၂၀၁၂ မှာ ပြီးဆုံးမယ်လို့ မျှော်လင့်ထား
ပါတယ်။ တနေ့ကို ရေနံစိမ်းစည် ၄၀၀,၀၀၀ ပို့နိုင်မှာဖြစ်ပြီး တနှစ်ကို ရေနံ ကုဗမီတာ
သန်းပေါင်း ၁၂,၀၀၀ ထိ ပို့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုက်လိုင်းကြောင့် ရေနံနဲ့ ပို့ဆောင်ရမယ့် အကွာအဝေး မိုင် ၇၀၀ လောက် တရုတ်အဖို့
သက်သာသွားသလို အချိန်လည်း သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။
ရေကြောင်းအသွားအလာများတဲ့ မလက္ကာရေလက်ကြားကို အခုလို ပိုက်လိုင်း
ဆက်လိုက်တဲ့အတွက် တရုတ်က ရှောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ စွမ်းအင်
အရင်းအမြစ်တွေ ရရှိနိုင်ဖို့လည်း ပိုမိုခိုင်မာသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗြိတိန်အမြင့်တက်သမား မြန်မာ့အရေး စွန့်စား ဆန္ဒပြ19 June 2009